baolina saucer manidina Factory - Mpanamboatra, mpamatsy, balafomanga manidina China
1.Endri-javatra vokatra: ny baolina fandefasana saucer manidina dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony na tariby vy faran'izay avo lenta aorian'ny lohateny mangatsiaka ary polesina amina endrika saucer manidina, ka io no iantsoana azy hoe baolina saucer manidina. Fanjakan'ny fitaratra.
2.Faritra fampiharana:Ny baolina saosy manidina, izay toa lovia manidina na lovia UFO, dia be mpampiasa amin'ny fitaovana。 Natao ho an'ny vy tsy ferrous vy vy, faritra varahina, firaka aliminioma sy fitaovana hafa, toy ny forging faritra, maty-casting faritra, faritra masinina, sns. Deburring, flashing, boribory, fidinana, fanesorana ny harafesina, fanamafisana metaly, famolavolana mazava sns.
Ny famaritana mahazatra ny baolina polishing miloko dia: 1 * 3mm, 2 * 4mm, 4 * 6mm, 5 * 7mm, 3.5 * 5.5mm, 4.5 * 7mm, 6 * 8mm, 8 * 11mm, sns.
Ny orinasan-tsika koa dia afaka manodina sy manamboatra karazana baolina saucer manidina isan-karazany arakaraka ny haben'ny takian'ny mpanjifa, miaraka amin'ny fotoana fandefasana fohy, fandefasana haingana, be dia be ary vidiny tiana indrindra.